Jumlada PD 3.0 Soo -saaraha Soo -saaraha iyo Alaab -qeybiye | BWOO
Dulmarka xeedho PD 3.0:
Qaabka Badeecadda: CDA68
Magaca badeecada: 20W PD 3.0 xeedho
Soo-galinta: Danab ballaaran, AC 100-240V
Soo saar: 20W
Dekedda: Dekedda Nooca C ah
Fiilo: fiilada UK, fiilada EU, fur US, oo la habeeyay
Xidhmada: sanduuqa warqadda tafaariiqda ee daaqadda furan oo leh nabar
Dammaanad: Hal sano
Shahaadada: CE/UL/FCC/Rohs, iwm.
Astaamaha xeedho PD 3.0:
Iyada oo la bilaabay taxanaha iphone12, 20W PD 3.0 charger ayaa ahaa xeedho-iibiyaha kulul. PD 3.0 charger wuxuu isku daraa faa'iidooyinka hab maamuuska degdegga ah, oo leh danab aad u sarreeya iyo qaabab waaweyn oo hadda jira. In kasta oo ay suuqa ka jiraan borotokoollo dhaqso oo kaladuwan oo degdeg ah, haddana aalado badan ayaa taageera PD Protocol, PD 3.0 charger wuxuu noqonayaa isbeddelka guud ee leh waxqabadkiisa sare iyo is -waafajin ballaaran.
Ilaalin badan. Iyada oo leh guntin caqli leh oo la dhisay, BWOO 20W PD 3.0 charger wuxuu awood u yeelan karaa aqoonsi u dhigma habka korantada. Awood-deminta caqliga leh, ilaalinta kuleylka, ilaalinta xad-dhaafka ah, ilaalinta hadda jirta, iwm.
Dardar galinta ku -dallacsiinta 3 jeer, si weynna u badbaadineysa waqtigaaga. iphone 8 iyo taxanaha dambe ee iphone oo leh hawl degdeg ah, PD 3.0 charger wuxuu kor u qaadaa hufnaanta lacag -bixinta illaa 3 jeer marka la barbar dhigo xeedho -dhaqameedka 5V/1A.
Aqoon dheeraad ah oo ku saabsan ku dallacsiinta degdegga ah:
Waxaa jira borotokoollo badan oo dhaqso u dallacsiinaya qalabka casriga ah ee IC chip -ka suuqa, kuwa ugu badan waxaa ka mid ah PD, QC, PEP, Huawei FCP, Oppo VOOC, iwm. Haddaba sidee ku kala duwan yihiin Baratakoolyadan lacag -bixinta ah? Sidee dhaqso degdeg ah looga hirgeliyaa dhulka?
Waxaa jira laba xal oo waaweyn oo lagu ogaanayo ku -dallacsiinta degdegga ah: mid waa danab sare/ku -dallac degdeg ah oo hadda jira, mid kale waa danab hoose/ku -dallac degdeg ah oo weyn hadda.
Xalka ugu horreeya, waa koronto sare/ku -dallac degdeg ah oo hooseeya, kuwa caadiga ah waa Qualcomm Quick Charge, PEP, Huawei FCP, iwm. Taas oo ah in la kordhiyo korantada ku -dallacidda hannaanka lacag -bixinta, si loo hagaajiyo awoodda lacag -bixinta. Lacag bixinta caadiga ah ee taleefanka gacanta, danabkii 220V waxaa loo yareeyaa 5V iyada oo loo marayo xeedho taleefanka gacanta, ka dibna wareegga gudaha ee taleefanka wuxuu hoos u dhigayaa danab 5V ilaa 4.2V ka dibna wuxuu u wareejiyaa awoodda batteriga. Si kastaba ha ahaatee korantada sare/hoos-u-dhigga degdegga ah ee hadda waa in la kordhiyo korantada wax-soo-saarka ee 5V xeedhaha taleefanka gacanta ilaa 7-20V, ka dibna wuxuu yareeyaa danab ilaa 4.2V gudaha taleefanka gacanta.
Xalka labaad ee ku-dallacsiinta degdegga ah waa danab hoose/weyn oo weyn, kaas oo ah in lagu xiro wareegga isbarbar socda ee danab gaar ah (4.5V-5V). At danab joogto ah, cadaadiska yar wareegga kasta qaybsiga ka dib si isku mid Sidoo kale taleefanka gacanta, wareeg kasta wuxuu qaadan doonaa cadaadis yar. Waxay ka fogaan kartaa awoodda kuleylka sare ee ay keento "cadaadiska sare ilaa cadaadiska hooseeya" beddelidda gudaha taleefanka gacanta. Borotokoollada degdegga ah ee dhaqsaha leh ee xalkan leh waa Oppo's VOOC iyo Huawei's Super Charge.
Si kastaba ha noqotee, borotokoolka PD 3.0 wuxuu isku daraa faa'iidooyinka borotokoolka ku -dallacaadda degdegga ah ee hadda jira ee suuqa wuxuuna dib ugu soo celiyaa xallin degdeg ah oo dhammaystiran oo dhammaystiran. Isla mar ahaantaana, PD 3.0 charger -ku wuxuu daboolayaa danab aad u sarreeya/hadda hooseeyo iyo danab hoose/koronto weyn. Baaxadda wax -soo -saarka korantada ayaa la nidaamiyaa: 3.0V ~ 21V. Intaa waxaa dheer, tallaabada wax -ka -beddelka korantada danab waa 20mV, fikradda guudna waxay isku daraysaa korantada/heerka hoose ee Qualcomm QC Degdegga Degdegga ah (isla tallaabada korantada is -beddelka qiyaasta waxay hubisaa hufnaanta lacag -bixinta) .
Iyada oo ay sii kordhayaan aaladaha mobilada ee taageeraya PD Protocol, xeedho PD 3.0 wuxuu noqonayaa isbedelka guud ee leh waxqabadkiisa sare iyo iswaafajinta ballaaran.
Hore: Fiilada xeedho taleefan
Xiga: Xeedho la qaadan karo 10000mah
Iphone 12 xeedho
Taleefoonka Wireless -ka Taleefanka
Iphone Charger -ka la qaadan karo
Charger Phone Portable
Iibiyaha Wireless -ka Iphone
Bixiyaha Taleefanka gacanta ee Wireless
Kuleyliyaha Taleefoonka Wireless
Fiilada xeedho taleefan
Adaporka taleefanka gacanta 2.4A Max
Qalabka fiilooyinka ee darbiga la qaadan karo
2.4A xeedho taleefanka gacanta